မိန်းကလေးလက်ရေးသီရင် ခွင့်လွှတ်ပေမယ့်(Handwriting) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မိန်းကလေးလက်ရေးသီရင် ခွင့်လွှတ်ပေမယ့်(Handwriting)
Posted by padonmar on Jan 23, 2012 in Creative Writing, Ideas & Plans | 58 comments
Pooch ပြချင်တာလေး နမူနာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သူ့ချစ်သူကို ပေးတဲ့ မေတ္တာစာလေးမှာ သူ့ရဲ့ လက်ရေး ကသီကရီလေးကို အပြစ်မမြင်စေချင်ပါဘူးလို့ တောင်းပန်ထားတဲ့ သီချင်းကလေးပါ။
လက်ရေးကနေ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို အကဲခတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ ပညာရှင်တွေလည်းရှိပါရဲ့။
ကျွန်မပြောချင်တဲ့ လက်ရေးကတော့ အဲဒီလို ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားအကြောင်းတွေ မဟုတ်ရပါဘူး။
ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့ စာဟာ လှတာမလှတာထက် ဖတ်ရှုသူရဲ့ သဘောပေါက် နားလည်မှုရရှိဖို့ အဓိကလို့ပြောချင်ပါတယ်။
လက်ရေးမလှလို့ စာမေးပွဲ တစ်ခုမှာ ကျွန်မဆုမရခဲ့တဲ့ အဖြစ်လည်းကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကာတွန်းတွေနဲ့တောင် လှောင်ပြောင်ခံရတဲ့
“ဆရာဝန်လက်ရေးပီသဖို့ သူများ ဖတ်မရအောင်ကျင့်ရေးနေတယ်” ဆိုတာလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောချင်ပါတယ်။
ဆေးကျောင်းသားတွေ လက်ရေးဆိုးရတာ အကြောင်းရှိပါတယ်၊
ကျောင်းသားတွေ ဆယ်တန်း(ကျွန်မတို့ကတော့ Regional college ) အထိ ဖတ်စာအုပ်တွေ အဆင်သင့်နဲ့ မြန်မာလို တစ်ပိုင်း စာသင်လာရရာကနေ
ဆေးကျောင်းစတက်ခါစမှာ Lecture ကို အင်္ဂလိပ်လိုချည်း သက်သက်စသင်ရတာက တစ်ကြောင်း
၊ဖတ်စာအုပ်တွေက လုံလုံလောက်လောက်မရှိ(photocopier တွေလည်း မပေါ်သေးတဲ့ခေတ်)
handout တွေတောင် မပေါများသေး
၊ဆေးကျောင်းကျူရှင်ဆိုတာ ရှားရှားပါးပါးဆိုတဲ့ သမိုင်းမတင်မီခေတ် ဖြစ်တာကတစ်ကြောင်း ဆိုတော့
ဆရာတွေ သင်တဲ့ Lecture ကို အသည်းအသန် လက်ရေးတိုတွေနဲ့ လိုက်ရေးကြရပါတယ်။
အားလပ်ချိန်တွေမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တိုက်ပွဲတွေ၊အပေါက်ဖါပွဲတွေ လုပ်ကြရပါတယ်
။အဲဒီတော့ ကျွန်မတို့ ဆရာဝန်တွေ လက်ရေးဆိုးရတာ မဆန်းပါဘူးလို့ရှေ့နေလိုက်ချင်ပါတယ်။
(ခုခေတ် ဆေးကျောင်းသားတွေကတော့ အစစအရာရာ photocopy,printer,internet ဆိုတာတွေ ပေါပေါများများရနိုင်တဲ့ ခေတ်ကြီးဆိုတော့
ကျွန်မတို့ ဆေးကျောင်းသားဘ၀ကနဲ့ မတူတော့ဘူးပေါ့နော။ကျွန်မတို့ထက် လက်ရေးပိုလှကြမှာပေါ့
လက်ရေးအလွန်လှသော ဆရာမကြီး ဒေါက်တာဒေါ်နှင်းရီ(ပါမောက္ခ သမားတော်ကြီး)
၊ဆရာကြီး ဒေါက်တာဦးကြည်စိုး(ပါမောက္ခ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)၊
ဒေါက်တာဒေါ်ခေမာရီ(သမားတော်ကြီး) တို့ရဲ့ လက်ရေးကတော့ အလွန်နှစ်ရာလောက် ရှင်းလင်းသပ်ရပ်သန့်ရှင်းလို့ လေးစားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ် ။
ဆရာဝန်လက်ရေးဖတ်မရလို့ ပြဿနာဖြစ်ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကတော့ အစုံကြားဖူးကြပါလိမ့်မယ်။
မကြာမတင်ကမှ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်တွေ့လေးတစ်ခု ကြုံတုန်းပြောပြချင်ပါတယ်။
ကျွန်မနဲ့ အလွန်ခင်မင်တဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ကျန်းကျန်းမာမာရှိရာကနေ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃လလောက်က ရောဂါတစ်ခု မမျှော်လင့်ပဲ ဖြစ်လို့ ဆေးရုံတက်အထူးကုတွေနဲ့ ပြလိုက်ရပါတယ်။
အဲဒီရောဂါအတွက် သောက်ရမယ့်ဆေးတွေဟာ အားဆေးမပါ ၁၀ မျိုးတောင်ရှိပါတယ်။
သောက်ရမယ့်အချိန်တွေကလည်း မနက်အိပ်ရာထအစာမစားမီ ၊မနက်စောစာ စားပြီး
၊နေ့လည်စာစားပြီး ၊ညနေစောင်းညစာစားပြီး ၊ည အိပ်ရာဝင်ခါနီး အမျိုးမျိုးပါပဲ။
နှစ်လုံး၊တစ်လုံး၊တစ်ခြမ်း၊တစ်တောင့် သောက်ရမယ့် ဆေးချိန်ကလည်း အမျိုးမျိူးပါ။
အဲဒီဆေးညွှန်းတွေပါတဲ့ ဆေးစာအုပ်ကို ကျွန်မကို အားကိုးတကြီးနဲ့လာပြပါတယ်။
ဆေးခန်းမှာပဲ ဆေးစာအုပ်ပြပြီး ၀ယ်လိုက်ရင်တော့ တစ်ခါတည်း ဆေးကဒ်တွေမှာ သောက်ရမယ့် အချိန်နဲ့ အရေအတွက်ရေးပေးမှာဖြစ်ပေမယ့်
ဈေးနည်းနည်းနည်းကြီးတော့ ကုန်ကျစားရိတ်သက်သာအောင် အပြင်ဆေးဆိုင်က ၀ယ်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်။
ကျွန်မက သူ့ရဲ့ စာအုပ်ကြည့်ပြီး စာရွက်လေးတစ်ရွက်နဲ့ ဆေးနာမည်၊သောက်ရမယ့် အချိန်တွေ ဇယားလေးဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီလို ရေးပေးရာမှာ အထူးကုရဲ့လက်ရေးက သိပ်အဆိုးကြီးမဟုတ်ပေမယ့် Aldactone ,Vasteral MR,Digoxin, …,
နောက် ဆေးနာမည်တစ်ခုကို ဖတ်အပြီး ကျွန်မ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်သွားပါတယ်။
ဖတ်လိုက်တော့ Paradenk ½ OD တဲ့၊ဒီလူနာကို ဘာလို့ ပါရာစီတမောတိုက်ပါလိမ့်လို့တွေးမိပါတယ်၊
၊အင်း အရည်ပျော်ဦးနှောက် ကျွန်မ မသိသေးတဲ့ ဆေးပညာအသစ်တွေလားလို့တွေးပြီး မြင်တဲ့အတိုင်းချရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီလူနာက နောက်နှစ်ပတ် ရက်ချိန်းမှာ ကျွန်မရေးပေးတဲ့ ဇယားလေးကို အထူးကုကို ပြလိုက်ပါသေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ နှစ်ပတ်ခြား ပြန်ပြရာကနေ တစ်လခြားပြရပါတယ်၊
ကျန်းမာရေးလည်းပိုကောင်းလာလို့ ၃လမြောက်မှာ ဆေးအချို့လျှော့ပေးပါတယ်
။ဆေးအပြောင်းအလဲ အသစ်ရေးပေးတဲ့ စာကို ဖတ်ရင်းကျွန်မ မျက်လုံးပြူးရပါတယ်
၊လွန်ခဲ့တဲ့ ၃လ ကတည်းက ကျွန်မရေးပေးထားတဲ့ Paradenk ဆိုတာက Furadenk ဆိုပါလား
၊ဘုရားဘုရား၊ကျွန်မ လူတစ်ယောက်ကိုး တိုက်ရမယ့်ဆေးမတိုက်ပဲ မတိုက်ရမယ့် ဆေးကို ၃လ လုံးလုံး တိုက်ခဲ့မိပါပေ့ါလား။
Paradenk ဆိုတာ အကိုက်အခဲပျောက် ပါရာစီတမောပါ Paracetamol၊
Furadenkဆိုတာ Lasix လို့လည်းခေါ်တဲ့ Furocemide ဆီးဆေးပါ၊
Fu ဆိုတာအစားလက်ရေးဆက်နေတော့ Pa လို့ဖတ်လိုက်မိတာပါပဲ။
အရည်ပျော်ဦးနှောက်ပိုင်ရှင် ကျွန်မက ဆီးဆေးထပ်ပေးတယ်မထင်မိပါဘူး
၊Trade name တွေ အကြားအမြင်နည်းတဲ့ ကျွန်မ အပြစ် အဓိကပါပါတယ်။
အော် ဒီဆီးဆေးမပါပဲလည်း ကျွန်မမိတ်ဆွေ လူနာက ကောင်းလာလို့တော်ပါသေးရဲ့၊
တခါ ပါရာစီတမောက များများသောက်ရင် အသည်းကို ထိခိုက်စေပါတယ်
။ဒါကို ၃လ ဆက်တိုက်သောက်လိုက်ရတဲ့ ကျွန်မမိတ်ဆွေအပေါ်လည်း တော်တော်ကို အားနာသွားမိပါတယ်။
သူဘာမှ မဖြစ်တာ ဒုတိယမ္ပိ တော်ပါသေးရဲ့။ dose နည်းလို့လည်းပါမှာပေါ့။
အခြားသော အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ မှားယွင်းမှုတွေလည်း ရှိခဲ့မှာပါ။
ဒီလို အဖြစ်တွေ မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြရပါ့မလဲ။
တချို့ ဆရာဝန်တွေက ဆေးဝယ်ပြီးရင် ပြန်ပြခိုင်းတတ်တယ်။ဒါလည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အချိန်ကုန်စေပါတယ်။
တချို့ကတော့ ဆရာဝန့်လက်ရေးမှတ်မိလောက်တဲ့ ဒီဆေးခန်းမှာပဲ ဆေးကိုအကုန်ဝယ်
၊ဒါမှမဟုတ် တစ်ရက်စာ တစ်ပတ်စာဝယ်၊ပြီးမှ အလားတူ ဆေးကို အခြားဈေးသက်သာရာဆိုင်မှာရှာဝယ်ကြပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ စိတ်ကူးကတော့ ကျွန်မတို့တွေ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေ ၊အရေးကြီးတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ အင်္ဂလိပ်လို ဖြည့်ရတဲ့အခါ
(သံရုံး VisaForm လိုမျိုး) PRINT LETTER နဲ့ ဖြည့်ပါလို့ပါပါတယ်။
Capital Letter (Upper case) ကို သုံးခိုင်းတာပါပဲ။
အဲဒီလိုပဲ ဆရာဝန်များကလည်း ဆေးညွှန်းကို Capital Letter နဲ့ရေးပေးတဲ့ အကျင့်လေးမွေးယူကြမယ်ဆိုရင်
ကျွန်မတို့တွေ လက်ရေးဆိုးတဲ့ ကာတွန်းဇာတ်လိုက်အဖြစ်ကနေ လွတ်လမ်းမြင်ပြီပေါ့။
မာမီကြီးခေါ်တဲ့ ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်လည်း ဒီကိစ္စ တိုက်တွန်းစာရေးဖူးပါတယ်။
ဆရာဝန်လက်ရေးသီလို့ လူနာ ဆေးမှားမိရင် ခုခေတ် မီဒီယာတွေ တံတွေးခွက်ထဲ လက်ပစ်လေးကူးနေရပါ့မယ်။
(ဘာမဆို ကွန်ပျူတာနဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်တဲ့ မြန်မာ့လူ့ဘောင်သစ်ကြီးထဲ ရောက်သွားနိုင်ရင်တော့ ဒီအဖြစ်တွေ မစိုးရိမ်ရတော့ဘူးပေါ့နော်။)
အခြားအခြားသော အင်္ဂလိပ်စာအရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကဏ္ဍတိုင်းမှာလည်း Print Letter သုံးကြရင် နားလည်မှု မှားယွင်းလို့ ချွတ်ချော်တာတွေ အတန်အသင့် ပပျောက်သွားမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ရွာသူရွာသားတွေကော ဒီလို အဖြစ်မျိုးများကြုံဖူးကြပါသလား၊
အခြားဘယ်လို နည်းလမ်းတွေနဲ့များ ဖြေရှင်းကြပါသလဲလို့ သိချင်ပါတယ်။
ကိုသစ်စကားငှားသုံးရရင် လက်ရေး ဆီမီနာပေါ့။
တရုတ်တွေရဲ့ ဟက်ပီးနယူရီးယားပါ မပဒုမ္မာရေ-
ဆရာဝန်လက်ရေးဆိုးတာကို တချို့လူတွေက လူတိုင်းမဖတ်တတ်အောင် တမင်ရေးတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။
ဖတ်တတ်အောင်ရေးရမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီဆရာဝန်ဟာ စိတ်ရှည်လက်ရှည် တလုံးချင်း ကြိုးစားရေးရပါတယ်။
အဲဒီလိုရေးတဲ့ဆရာဝန်တွေလဲ တွေ့ဘူးပါတယ်။ အခုရေးနေရင်း သတိရလိုက်တဲ့ တယောက်ကတော့ အနောက်ပိုင်းဆေးရုံကြီးရဲ့ ဆေးရုံအုပ်ဟောင်း(လို့ထင်ပါတယ်) ဒေါ်ခင်ခင်သက်ပါ။
လူနာက ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆေးဈေးသက်သာတဲ့နေရာမှာ ရှာဝယ်တတ်မှန်းသိလို့ ဆေးမမှားအောင် သူ့ခမျာ ကြိုးကြိုးစားစား တလုံးချင်းရေးပေးရှာပါတယ်။
တကယ်တော့ ဆရာဝန်အများစုကတော့ အဲသလိုမဖြစ်နိုင်တာမို့
ဆေးဝယ်ပြီးပြန်ပြတာက အချိန်ကုန်အလုပ်ရှုပ်ပေမယ့် သင့်တော်တဲ့နည်းလမ်းတခုလို့ပဲ ကျွန်တော်တော့ထင်မိပါတယ်ဗျာ။
ဒေါ်ခင်ခင်သက် ကတော့ တကယ် စိတ်ရှည်ပြီး စေတနာ ထားတဲ့ ဆရာဝန်မကြီးပါ။
အဖေနေမကောင်းလို့ ညသန်းခေါင် ဆေးရုံတက်ရင်တောင် ဘယ်သူမှ လှည့်မကြည့် ဆရာဝန်မကြီးကို မပြောရဲပေမဲ့ သူကို ပြောပြလိုက်ရင် ချက်ချင်း အိပ်နေလည်း ထ ပြေးလာတတ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စေတနာက ဆူး တို့ မိသားစု အပေါ် ကျေးဇူးရှိပါတယ်။
ဒေါ်တင်မေညွှန့် ကတော့ ရောဂါ လက္ခဏာက အစ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် မှတ်တမ်းတောင် လူနာ မိသားစု သိအောင် မြန်မာလို ရေးပေးတယ်။
ဆရာဝန်တွေ ကံဇာတာ မှေးမှိန်နေကြချိန်မှာ ကရုဏာရှင် ဆရာဝန်ပီသတဲ့ ဆရာမကြီးတွေအကြောင်း ရေးပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Read more: http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1578074,00.html#ixzz1kIrqdIC9
သမားတော်ကြီး ဒေါ်ခင်ခင်သက် ကို ဆိုလိုတာထင်ပါတယ်။လေးစားပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူနာရှင်နဲ့ လူနာဖက်က ကြည့်ရင် ဆေးဝယ်ပြန်ပြတာ safe အဖြစ်ဆုံးဆိုပေမယ့် တစ်နေ့လူနာပေါင်း ၅၀-၁၀၀ ကြည့်နေကြရတဲ့ ဆရာဝန်တွေက သေချာ ကြည့်ပေးနိုင်ပါ့မလား ။
ကျွန်မမိတ်ဆွေလည်း ဆေးပြန်ပြတာနဲ့တူတဲ့ ဆေးစာရင်းဇယားကျွန်မရေးပေးထားတာလေး သွားပြခဲ့ပါတယ်။
ဆေးတွေကလည်း trade name များစွာ ပုံစံကွဲများစွာ ဆိုတော့ မျက်စိတစ်ဝင့်နဲ့တော့ သေချာ မမြင်လောက်ဖူးထင်ပါရဲ့။
In Myanmar, all first year Engineering students start their Engineering Drawing exercises by writing A to Z,0to9( All in Capital letter only ). If could not use typing, must write down only in Capital letter. It is the rule for Engineers. Till now, I have to proud of our GTI’s lettering training. Must be clearly written, Should not be misread.
သဂျီးတို့ရဲ့ အမေဂျီးကားမှာတောင် မပီသတဲ့ဆေးညွှန်းတွေကြောင့် တစ်နှစ်ကို လူ ၇၀၀၀ ကျော် သေရပါသတဲ့။တော်ပြီ၊အမေဂျီးကားမှာ သွားမနေတော့ဘူး။
ဆရာဝန်ကမှ ဆေးစာမှားရင် လူတစ်ယောက်တည်းရဲ့ အသက်ပဲဆုံးတာ
အင်ဂျင်နီယာတွေ ရဲ့စာမပီသရင်တော့ တံတားတွေ တိုက်တွေ လမ်းတွေ မခိုင်မာလို့ လူပေါင်းများစွာ
GTI မှာလည်း lettering training ရှိရကြောင်း အသိတိုးရလို့ကျေးဇူးပါနော်။
ဆရာဝန်ရေးလွှတ်လိုက်တဲ့.. ဆေးစာကိုဖတ်တာ.. ဆေးထုတ်ပေးတာ.. ဆေးဆိုင်က.. pharmacy တက်ကနစ်ရှန်တွေပါ..။ တနာရီ ၁၅-၂၀လောက်ရကြတယ်..။အဲဒီအပေါ်ကမှ..Pharmacist တွေအုပ်ချုပ်တာလို့ ထင်တယ်..။
ဆိုတော့.. တချို့ဆေးတွေကို.. Pharmacist ကဆ၇ာဝန်ထက်တောင် ပိုသိနေပုံပဲ..။ အဲဒီဘာသာရပ်က.. ဒေါက်တာရိတ်အထိရှိပါတယ်.။
ဆိုတော့.. Pharmacistက.. ဆေးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့.. ပရိုလို့ ယူဆရပါတယ်..။ လစာက ဆရာဝန်လောက်တော့ အသာလေးရှိတယ်..။ ၁နှစ်၁သိန်းကျော်ပါတယ်..။
ဒီကြားထဲတောင်.. ယူအက်စ်မှာ..ဆေးမှားပေးပြီး.. ဒီလောက်သေနေကြတော့ကာ…. :~:
ဇော်ဝင်းခိုင် ၏ ကိုယ်တွေ့ “ ဆေးပေးမှားတဲ့ည ” ။
“ ဆေးပေးမှားတဲ့ညပေါ့ကွယ် ၊ ရေခဲတိုက်မှာလဲ နေရာမစုံပါတယ် ။ ဝေဒနာတွေ ကုစားပေးတဲ့ ဖီးဆစ်ရှင်…. ရှင်သန်ရင် ထာဝရ မြိုးမြက်ဂွင် ”
ဇော်ဝင်းခိုင်ရဲ့ ဆေးပေးမှားတဲ့ည တေးရေးဆရာကတော့ နန်းတော်ရှေ့ ဆရာပေဖြစ်ပါတယ်။
အစ်မ ပဒုမ္မာရေ – ကဗျာဆန်လိုက်တဲ့ ခေါင်းစဉ် နဲ့ ကောင်းလိုက်တဲ့ အရေးအသားလေး။
အစ်မရဲ့ “နိုင်ငံကိုတကယ်မချစ်လို့စွန့်ရစ်လေရော့သလား” ကို မျက်ရည်လည်ရွှဲနဲ့ ဖတ်ပြီးကထဲ က အစ်မ အရေးအသားကို မှတ်မှတ်သားသား ရှိနေခဲ့တာပါ။
အစ်မ တို့လောက က ဆေးနာမည် တွေ ကလဲ ဆင်တူကြသားနော်။ Paradenk နဲ့ Furadenk ဆိုတာ က တကဲ့ကို မှားချင်ဖွယ်ရာ ပါဘဲ။
တော်သေးတာပေါ့နော်။ Paradenk (အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး) တိုက်ရမှာကို Furadenk (ဆီးဆေး) မှားပေးမိရင် ကွိုင် ဘဲ။
တကယ်တော့ ဆရာဝန်အလုပ်က အတော်တာဝန်ကြီးတာဘဲနော်။
ကျွန်မ ယောင်းမ ကတော့ သူ့ဆေးခန်းမှာ မလို ဘဲ အတင်းဆေးထိုးခိုင်း တဲ့ လူနာတွေနဲ့ တကျက်ကျက် ဘဲ။ အပြင်မှာ တွေ့တဲ့တစ်နေ့ ဆွေမျိုးစပ်ကြည့် ကြတာပေါ့။ :-)
ဆေးနာမည်တွေက များသောအားဖြင့် ကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့ ဆေးရဲ့ chemical name ပေါင်းမှည့်တတ်ကြတယ်။
ဒီ Denk Pharma ဆိုတဲ့ company က Germany ကပါ။
သူ့ဆေးတွေအားလုံးမှာ Denk ဆိုတာပါတယ်၊
Amoxil ဆို Amoxil-Denk,Vitamin B1+B6+B12 ဆိုရင် Vit-B Denk,Paracetamol က Para-Denk စသည်ဖြင့်ပေါ့။
ဆရာဝန်အလုပ်က သူမှားရင် ချက်ချင်းလက်ငင်း လူအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တော့ တကယ့်ကို တာဝန်သိရင် တာဝန်ကြီးတဲ့ အလုပ်ပါ။
ကျွန်မဆိုရင်လည်း တတ်နိုင်သလောက် ဆေးမထိုးပေးချင်ဘူး။
ဆေးခန်းစဖွင့်တုံးကဆို သူ့မြေးလေးဖျားတာ အတင်းဆေးထိုးခိုင်းတဲ့ အသိအဖွားကြီးနဲ့ စကားတွေများရသေးတယ်လေ။
သူကြီးရဲ့ စကားအတင်းစပ်ဆိုတာလိုပဲ ကျွန်မတို့လည်း ဆွေမျိုးအတင်းစပ်ပေါ့။
မလတ်ယောင်းမက ဘယ်နှစ်က ဘွဲ့ရလဲ။ကျွန်မက 86 Batch ပါ။
ကျွန်မကလည်း ဆရာဝန့်အမျိုးလို့ကြားလိုက်ရရင် အလိုလို ကိုယ့်ဆွေမျိုးလို့ထင်ထင်နေမိတယ်
အဘ FR ကိုတောင် အဘမိန်းမဆရာဝန်မကြီးဆိုတာနဲ့ မတ်ကလေးတော်ထားရသေးတယ်။
အစ်မ ပဒုမ္မာ – ကျွန်မ ယောင်းမ က ၁၀တန်း – ၇၉ခု အောင် ဆိုရင် ဆေးကျောင်း ပြီးတာ ၈၅/၈၆ လား။
အစ်မတို့ ရှေ့ နောက် အတူတူ တွေ ဖြစ်နေကြမလားဘဲ။
ဒါဆိုရင် ကျွန်မ က ငယ်ရင်တောင် ၁နှစ်/၂နှစ် ပေါ့။
ကြည့်ရတာ အဘဖော က မတ်ကလေး ဆိုတော့ ကျွန်မတို့ ထက် ငယ်နေပြီပေါ့။
ကျွန်မ အစ်ကို က အဘဖော လိုမျိုး။
ဒီတစ်ခေါက် ကျွန်မ ပြည်တော်ပြန်ရင် တွေ့ချင်ပါတယ်။
လက်ရေး ကိုပြန်ဆက် ရရင် …..
ကွန်ပျူတာ နဲ့ ဘဲရေးနေလို့ လက်နဲ့ စာရေးရင် မရေးတတ်တော့လောက်အောင် ဖြစ်ပြီး လက်ရေးပျက်သွားသူတွေ အများကြီး ရှိတယ်ဆိုရင် ရီစရာ ဖြစ်နေမလားဘဲ။ ;-)
မမအေးကေကေ ကိုတော့ သေခြာလို့ အစ်မခေါ်နိုင်ခဲ့ပြီ။
ဆြာသစ် – အမှန်တော့ ငယ်ချင်ယောင် ဆောင်ထားဦး မလို့ ဘဲ။
အခု တော့ ရွာအပြင် မှာ ရွာသူ တွေနဲ့ တကယ် တွေ့ချင်လာလို့ ကြိုပြီး အဖြစ်မှန် ကို ရင်ဆိုင် ထား လိုက်တာ။ LOL
အသက်သာကြီးတယ်။ အကျင့်က ပေါတာတော ဖြစ်ဆဲပါဘဲ။ ;-)
မလတ်ယောင်းမက ကျွန်မထက် ၁နှစ်ငယ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ရွာသူတွေထဲမှာ တီချာကြီးကလွဲရင် ကျွန်မ အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်၊
က်ုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ ကလေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီး ရွာထဲ Netizen လုပ်နေတာလေ။
ကျွန်မတို့ကလည်း ရွာ့အမာခံ အမျိုးသမီးတိုက်စစ်မှူး မလတ်ကို တွေ့ချင်နေကြပါတယ်။
calculator သုံးပါများတော့ ၂x၆ ကို ခလုပ်နှိပ်မကြည့်ရင် ကိုယ်ဆိုတဲ့ အလီ ကိုယ်မယုံတော့သလိုပေါ့။
ဆေးထိုးတာ Crazy ဖြစ်တဲ့ ဆရာဝန်တွေ့ဖူးတယ်။
ကလေးအထူးကုဆရာဝန်တစ်ယောက်ပဲ။ သူ့ဆေးခန်းက အမြဲတမ်း လူနာအပြည့်ဘဲ။ ကလေးအထူးကုဆိုပေမယ့် လူကြီးတွေလည်း ပြကြတာပဲ။
ခက်တာက ဆရာက ဘာရောဂါဖြစ်ဖြစ် ဆေးထိုးပေးပြီး သောက်ဆေးပေးတတ်တာပဲ။
အဲဒါနဲ့ မဖြစ်မနေမှပဲ သူ့ဆေးခန်းပြတော့တယ်။
သမဏေန သမဏော၊ ပေါနေန ပေါနော။
သာမဏေရှိရာ သာမဏေစု …………..,————- ။
တကယ်ကပေါတယ် ဆိုတာ သင်ယူလို့မရပါဘူး။
ပါရမီရှိမှ ပေါလို့ရတာဖြစ်လို့ ဂုဏ်ယူစမ်းပါခင်ဗျာ။
ပေါတယ် ဆိုတာလူတွေကိုရယ်ရွှင်စေတယ် ဆိုတော့ ပေါတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ရတယ်ဗျ။
ဆရာသက်လုံ (ကြပ်ကလေး) ရဲ့ စာပေါလောက ဆိုတာဖတ်ရတာဘယ်လောက်ကောင်းသလဲနော။
၀င်ရောက် ဖတ်ရှုသွားပါသည် အန်တီပဒုမ္မာရေ ….
ဖားသက်ပြင်း ကိုယ်တိုင်ကတော့ အလွန်လက်ရေးလှသူမို့…
မဆွေးနွေးနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါနော… (ဟီး…. နောက်တာပါဂျာ …)
လက်ရေးလှဖို့ ပီဖို့ ဖတ်လို့ရဖို့ ….ဒါကပထမအချက်..(ခနလေးတေးထားပေးနော..)
ဆေးနာမည်ဆိုသည်များဝယ် တကယ် ရှုပ်ထွေးပွေလီလှပေသော်ကောလားခညား…
ကန်မီကယ်လ် နာမည်အစွဲပြုပေးရ တာနဲ့ ..
မက်ဒီကယ်လ် ပွိုင့်နော့်ဗ်ဗျူး နဲ့ ပေးရတာ နဲ့
ထရိတ်နိမ်း(ဘရန်းနိမ်း) နဲ့ သွားရတာနဲ့ …
(အဲ့လောက က မာကတ်တာများ ကြံကြီးစီရာ သိပ်လုပ်တယ် … သူတို့ဆေးနာမည်တွေကို
သူများထက် ထူးခြား ကွဲပြားပြီး high-tech ပုံပေါက်အောင် XYZs တွေသုံးပြီး ပေးတတ်ကြသေးတယ်
ရောဂါတူ မရှား ဆေးတူမရှားပေါ့ ဟီး… သည်တော့ ဒါကို ဒုတိယ၁ချက် လို့မှတ်မယ်ဗျာ
သည်နေရာမှာ နည်းပညာ အကူအညီလေး ယူလိုက်ရင် မကောင်းဘူးလားဗျာ..
ကွန်ပြူတာ တလုံး ရယ် …စူပါမားကတ်တွေမှာ recieve တွေ ပရင့်တဲ့
ဒေါ့မက်ထွစ် ပရင်တာ ပေါက်စလေးရယ် ပဲလိုမယ်ဗျာ …
ကွန်ပြူတာထဲမတော့ ရောဂါအလိုက်- အက္ခရာစဉ်အလိုက် – အမျိုးအစားအလိုက်
ဘရန်းအလိုက်- ရွေးထုတ်ပေးနိုင်မယ့် ပလိုဂရမ် တပုဒ်ကို ဆေးနာမည်တွေရဲ့ ဒေတာဘေ့စ်နဲ့
ချိတ်ဆက်ပေးထားမယ်ဗျာ..(စဉ်ဆက်မပြတ် အပ်ပ်ဒိတ်တော့ လုပ်ရမယ်..)
ဆရာဝန်အနေနဲ့ ဆေးပေးတဲ့အခါ အနှီ ပရိုရရမ်သုံးပြီး ဆေးရွေး (စကရင်မှာ ရွေးထားတဲ့ဆေးရဲ့
ကွန်ပေါင်း. …ဂျန်နရေးရှင်း …ဆိုက်ဒ်အဖက် …ကွန်ထရိုဗာရှယ်လ် ..အဗေလဗဲလ် ဘရန်းနိမ်း..
ဒါမျိုးတွေပြပေး ရင် ရက်ဖရန့်စ် အနေနဲ့တောင် သုံးနိုင်သေး…) …ဒို့ဇေ့ခ်ျ ရွေး ပြီး … ပရင့် ထုတ်ပေးရုံပဲ ..
ကောင်းဝူးလားဗျာ …မြို့ပေါ်က ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာဖြင့် လက်ရေးပြသနာ လုံးဝ ကင်းရှင်းသွားနိုင်ပါကြောင်း..
မီလျှံဘစ်ဇနက် မဟုတ်ပေမယ့် သောင်ဇင် လိုက်ဗ်ဇ်စ် ကိုတော့ ဆေ့ဗ် နိုင်မှာလို့ ယူဆပါကြောင်း…
ဂီဂီရေးပြမှ ဆေးနာမည်တွေပေးတဲ့ စနစ်ကလေးများမူသေ သတ်မှတ်ကြရင် ကောင်းမှာလို့တွေးမိပါရဲ့။
ဒါပေမယ့် ကားတွေမှာ သုံးနေကြတဲ့ အချက်ပြမီးတို့၊ဂီယာတို့၊စသည်တွေ ဘယ်အမျိုးအစားကားမဆို ပုံသေသုံးတဲ့စနစ်တစ်ခု တီထွင်ဖို့ဆိုပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်လောက်က ကြားဖူးတာလေးတောင် နားဝကထွက်သွားပါပေါ့။
ဒီအကြံအတိုင်းလုပ်ဖို့ အထူးကုဆေးရုံကြီးများကတော့ တတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ပရင်တာပေါက်စန နဲ့ ကွန်ပျူတာ ရဲ့ Estimate Cost လေးပါ သိရရင် ကောင်းမှာပါပဲ။
ကွန်ပေါင်း. …ဂျန်နရေးရှင်း …ဆိုက်ဒ်အဖက် …ကွန်ထရိုဗာရှယ်လ် ..အဗေလဗဲလ် ဘရန်းနိမ်း.. ဒါလေးတွေပါတဲ့ programme ကို promotion အတင်းဆင်းနေတဲ့ ဆေးကုမ္ပဏီတွေ လုပ်ပေးနိုင်ကြမှာပါ။
Million lives ကို မ save နိုင်လည်း At Least One life ကို danger မဖြစ်စေဖူးလို့ confidence ရမယ်ဆိုရင် ကျေနပ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ ဆေးခန်း ကွန်ပျူတာ စနစ် ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်လောက် ကထဲ က နာမည်ကြီးပြင်ပ ဆေးရုံ တစ်ခုမှာ Propose လုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်း အသေးလေး တွေ မှာလဲ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် Standalone PC လေးတွေ နဲ့လဲ သုံးလို့ ရမှာပါ။ တကယ်တော့ User စိတ်ဝင်စား ဖို့ဘဲ လိုပါတယ်။
အရင်ကတော့ လူတွေ က ကွန်ပျူတာ ဆို သိပ်မရင်းနှီးတော့ သုံးဖို့ စိတ်မပါလှကြဘူး။
စက်နဲ့သုံးတာဟာ လူကို အတော်သက်သာ တယ် ဆိုတာကို မသိသေး၊ အရသာ မတွေ့ သေးလို့ရယ် ၊ မီးက လုံးဝ မမှန်တာကြောင့် မီးစက် နဲ့မို့ ကွန်ပျူတာ ကို အလွယ်သုံးဖို့ မရနိုင်တာ ရယ် နဲ့ မြန်မာပြည် မှာ ကွန်ပျူတာ စနစ် ကို သာမာန် နေရာလေး တွေမှာ သုံးဖို့ မတွင်ကျယ် ခဲ့တာ ထင်ပါရဲ့။
တကယ်တော့ ကွန်ပျူတာစနစ် ဆိုတာ ဘယ်လုပ်ငန်း မှာမဆို မရှိမဖြစ် ဖြစ်နေသင့်ပါပြီ။
အစိုးရက လဲ နည်းမှန်လမ်းမှန် နဲ့ ပံ့ပိုးပေးဖို့ လိုမယ် ထင်ပါရဲ့။
ကြီးကြီး ပဒုံမာ …ေ၇…
(အရီးတော်ထက် စီနီယာကျပြီး …ကျနော့်မိဘထက်လည်း အသက်ကြီးသူမို့ပါ….)
ဆေးရုံကြီးတွေက စလုပ် သင့်ကြောင်းပါဗျာ …..သည် ဆော့ဖ်ဝဲ လိုဟာမျိုး
ဖြစ်ထွန်းလာဖို့ သူတို့က စပြီး တွန်းအားပေး… စိုက်ထုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ကြောင်းပါ…
ကနဦး အရင်းက အတိုင်းအတာတခုထိ တာသွားပေမယ့် နောက်ပိုင်း … ဆေးရုံကြီးကနေ ဆေးရုံလတ်…
ထိုမှ တဆင့် ဆေးခန်း မကြီးမငယ်လေးများ …အလတ်စားတွေ ကုန်တော့ တဦးချင်းစီ ထိုင်တဲ့ ဆေးခန်းများ..
သည်လိုမျိုး လက်ဆင့်ကမ်း ရောင်းချပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် …(ရေးတဲ့ အိုင်တီသမားတွေဘက်လည်း …
ထိုက်သင့်ကသလောက်ရ …ဆရာဝန်တွေလည်း ရီဇန်နေဘယ်လ် ပရိုက်ဇ်နဲ့ တစ်ဦးချင်းစီ ၀ယ်သုံးနိုင်
ဒါမျိုး အဆင့် ဖြစ်လာအောင် ဆောင်ကျဉ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ….ဆေးပညာ-အိုင်တီ-ကတ်စတမ်မာဆားဗစ်စ် …
၃ပန်လှ အနေအထားတခုကို ချပြနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း… ဆွေးနွေးတင်ပြမိပါ၏ဗျာ….
ကော်ပီရွိုက် စည်းမျဉ်းကောင်းကောင်းနဲ့သာ ကွပ်ညက်နိုင်ရင်တော့ အားလုံးကောင်းဖို့ဖြစ်မှာပါလို့
နောက်ဆုံး တခုလောက် ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ…. ဒါမျိုး စစ်စတမ် ရှိဦးတော့ …
စရိတ်ကျေဖို့ရယ် ..ရပ်တည်နိုင်ဖို့ရယ်….အားလုံး ခြုံငုံပြောရရင်…
ဆြာဝန်များများ ၀ိုင်းသုံးနိုင်မှသာ ECONOMY OF SCALE ရပြီး …(မှန်းချေ လိုင်စင်တခု
ထောင်ဂဏန်းလောက်နဲ့ ရောင်းနိုင်မှာကိုး …) ကိုက်မှာပါဗျာ …လူနည်းနည်းကို ဈေးများများနဲ့ ပဲ
လက်သိပ်ထိုးရောင်းတာမျိုးကို ကျနော်တို့ ဂိုဏ်းက စီးပွားရေးလို့ မသတ်မှတ်နိုင်ပါ..(ဇီးကွက်စီးပွားရေးတော့
ထိုသို့ သာတူညီမျှစွာ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ပျံ့နှံ့ စီးဝင်မှု မြင့်မားစွာရောင်းနိုင်မှပဲ …ဖြစ်မယ်ဗျာ…
မဟုတ်ရင် မရောင်းရရင် အကျိုးမရှိ …ဈေးကြီးလွန်းလို့ထိပ်ဆုံးအလွှာပဲ သုံးနိုင်ရင် effective မဖြစ် …
ပြောရရင် ရှည်မယ်ဗျာ အားလုံးလည်း သိပြီးသားပါပဲ ….
ဒါတွေကို ရှောင်လွှဲနိုင်စေဖို့ ပိုကောင်းတဲ့ အားဖြည့်မှုတွေ ဖြစ်လာစေဖို့ ……
ပိုကောင်းတဲ့ မနက်ဖြန်အတွက် …ယနေ့ည အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ရင်း… အားသစ်တွေမွေးရင်း…
accounting software တွေလိုပဲ စိတ်ရှည်လက်ရှည် မားကက်တင်းရပေမပေါ့၊
သူတို့ကတော့ ၃ သိန်းလောက် ပတ်ဝန်းကျင် ရှိတယ်နော်။လူသုံးနည်းနေလို့ ဈေးမကျသလားတော့ မသိဘူး။
ကြီးကြီးလည်း (.ဆေးပညာ-အိုင်တီ-ကတ်စတမ်မာဆားဗစ်စ် …
၃ပန်လှ အနေအထားတခု) ကိုရောက်စေချင်ပါတယ်
လျှပ်စစ်ဖြင့် လောကနိဗ္ဗာန် တည်ဆောက်အံ့ဆိုတဲ့ နေ့ကိုရောက်ဖို့လည်းမဝေးတော့ဘူးထင်ပါရဲ့။
မမက နှူးဘာတို့ရဲ့ မိခင်ကြီးဆိုကတည်းက အင်းငါတော့ နူးဘာတို့ရဲ့ ကြီးတော်ကြီး ဖြစ်တော့မှာပဲလို့ မျက်ခုံးလှုပ်နေတာ၊
ကွန်ပျူတာက သာမန်အိမ်သုံး ပီစီ အဆင့်ပဲ လိုအပ်တာပါဗျာ…
(ယနေ့ခေတ်ပေါ်ကိုယ်ပိုင် လက်ပကျွတ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒက်စတွပ် ပဲဖြစ်ဖြစ် သုံးနိုင်ပါရဲ့ဗျာ. )
ပရင်တာကလည်း ဒေါ်လာ-၂၀၀ အောက်နဲ့ ၀ယ်လို့ရတဲ့ အမျိုးအစားတွေ ရှိပါတယ်..
သည်တော့ အက်စတီမိတ်တတ် ခိုစ့် ကို အကြမ်းဖျဉ်း..ကိုတေးရှင်းတင်ရလျင်ဖြင့်..
၅-၇သိန်း ကြားလောက်သာ ကုန်ကျမှာပါဗျာ…။
အပျော့ထည် ကိစ္စကတော့ နည်းနည်း ပြောစရာလေးရှိသဗျ. ….
အန်တီဗိုင်းရပ်စ် အပျော့ထည်တွေလိုမျိုး လိုင်စင် နဲ့ သုံးတာမျိုး ထုတ်ရောင်းဖို့လိုလိမ့်လို့ ယူဆပါကြောင်း..
(သူက အချိန်နဲ့အမျှ အပ်ပဒိတ် လုပ်ပေးရမယ့် သဘောသဘာဝ တွေတူညီနေတာကိုး ….)
အကောင်းတင်းအပျော့ထည်တွေနဲ့ သည်နေရာမှာ နည်းနည်းကွာသွားတယ်ခင်ဗျ…
ပလိုဂလမ် သဘောအရမှာ သိပ် ရှုပ်ထွေးပွေလီတဲ့ တွက်ချက် စစ်ဆေးရတာ တွေမပါဝင်တာမို့…
အလွယ်တကူ ရေးသားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား…(ဒေရှင်နရီပြုစုသလို ဒေတာအင်ပွတ် ပိုင်းတော့
များပြားလှသမို့ …အားတော့ထည့်ရမယ့် အလုပ်ပါ…. ) ဆိုလိုသည်မှာ လွယ်ပင်လွယ်သော်ငြား
အားထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကုန်ကျစရိတ် တစုံတရာ တော့ ရှိမှာပါ…။
ဆေးခန်းကြီးတွေကို တဈေး(သူကတော့ စတန်းအလုံး မဟုတ်ဘဲ နတ်ဝါ့ခ် ချိတ်ဆက် ဖန်ရှင်တွေပါ ပါဝင်ရမယ်..)
၁ကိုယ်ရေသုံး ဆေးခန်းလေးတွေကို တဈေး ..နဲ့ လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ….critical market share ကိုသာ
ရရှိနိုင်မယ်ဆိုရင် ယူဇာ အကောင့်တခုကို ၁နှစ်လိုင်စင်နဲ့ …ကိုမှ ….သောင်းဂဏန်းနဲ့ ရောင်းနိုင်လာမှာပါ….။
(ဆရာဝန်အသင်းနဲ့ ကွန်ပျူတာအသင်း ..ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း ……
ဆြာ့ဆြာကြီးတွေဆိုတော့ ဖားသက်ပြင်းလို ဗရုတ်သုတ်ခ ပေါက်စန က အသံကျယ်ကျယ် မပြောရဲပါကြောင်း..)
အန်တီပဒုံမ္မာရေ … ဆရာဝန်အများစုရဲ့ လက်ရေးဆက်က … သာမာန်လူ ဖတ်လို့မရတတ်ဘူး … ။ အန်တီပြောခဲ့သလို လက်ချာတွေ မှီအောင်လိုက်ရတာကြောင့်လည်း ပါပြီး …. စတိုင်လုပ်ရေးတာလည်း နည်းနည်းတော့ ပါမပေါ့လေ …
တုံတုံရဲ့ အက်ကို ကလည်း စတိုင်ထုတ် ရေးတာပဲလား။ :D
အောင်မယ်လေး။ ဖတ်လဲပြီးရောရင်ကိုတုန်သွားတာပဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ကြမတုန်း။ အထူးကုဆရာဝန်လက်ရေးကိုဆေးပညာ ၇ နှစ်သင်ထားတဲ့ဆရာဝန်တောင်မှားဖတ် တယ်ဆိုရင် ဆေးပညာလုံးဝသင်မထားပဲလိုင်စင်လျှောက်ပြီးဆေးရောင်းနေတဲ့ဆိုင်တွေက ဘယ်လောက်တောင်မှားဖတ်နေကြမတုန်း။ အောင်မယ်လေး ဘယ်သူ့ယုံလို့ပုံရမှတုန်း။ ကယ်တော်မူကြပါ။ နောက်ဆိုရင်တော့ဆေးဝယ်ပြီးရင် တိုကင်တခေါက်ထပ်ယူပြီး အထူးကုဆရာဝန်ကို ၀ယ်လာတဲ့ဆေးတွေကို double check လုပ်ခိုင်းတာပိုစိတ်ချရမယ်ထင်တယ်။
သများကတော့ ဆရာဝန်မဟုတ်ပဲနဲ့ ကို ပဲပင်ပေါက် လက်ရေး
ခုဆို ဘောပင်တောင် ကိုင်တတ်တော့ဘူး..
ညီလေးပေါက်ဖေါ်ရေ….ဆေးရုံဆေးခန်း မရောက်ရလေအောင် ဘီယာပဲသောက်၊ဘီအီးမသောက်နဲ့ပေါ့ ညီလေးရာ…
ဆရာမရေ…အကောင်းဆုံးကတော့ ဆေးစာတွေကို computer print နဲ့ထုတ်ပေးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးလို့ထင်မိပါတယ်..တစ်ချို့ဆေးဆိုင်တွေကလည်း ဆရာဝန်လက်ရေးကိုမှန်းဆပြီးပေးလိုက်လို့ တစ်ကယ့်လူနာရှင်တွေဒုက္ခရောက်ခဲ့တာလည်းများလှပါပြီ၊ခေတ်နဲ့အညီ တိုးတက်လာပြီဆိုရင်တော့ အားလုံးပြင်သင့်တာတွေပြင်ရတော့မှာပေါ့နော်…
ဆေးတစ်ခု အသစ်သောက်ရမယ်ဆိုရင် ဒါဘာဆေးလဲ၊ဘာအတွက် သောက်ရတာလဲ၊သူ့ရဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးကဘာတွေရှိနိုင်လဲဆိုတာ
internet ထဲမှာ ရှာဖတ်ကြည့်ပါကွယ်။
(အင်တာနက်ကနေ ဂေဇက်ဖတ်နိုင်တဲ့သူမို့လို့ able person လို့ ယူဆလို့ ပြောတာပါကွယ်)
ကျေးဇူးပါအစ်မ။ ကျွန်မကဆေးခန်းကြောက်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆေးခန်းမသွားဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲရမ်းကုတယ်။ ဟဲဟဲ။ အမျိုးသားကတော့တခုတခုဆိုအမြဲဆေးခန်းသွားတယ်။ သူ့ကိုဒီပိုစ့်ပေးဖတ်ရမယ်။ ကျေးဇူးအထူးပါ။
ဒေါ်ဒေါ်ရေ ဘန်ကောက်ဆေးရုံရဲ့ ဆေးပေးပုံကတော့ လွယ်ကူ ရှင်းလင်းလှပါတယ် ။ မှားစရာအကြောင်းလည်း မရှိပါဘူး။ သောက်ရမဲ့ ဆေးအမည် သောက်ရမဲ့ အချိန် ကို ကွန်ပျုတာနဲ့ ထုတ်ပြီး ဆေးကို လည်းပလတ်စတစ်အိတ်ထဲထည့်ပြီး အပေါ်မှာ စတစ်ကာနဲ့ ကပ်ပေးလိုက်တာပါ။ ရက်စွဲ ဆေးပေးတဲ့ ဆရာဝန် အမည်ပါ တခါထဲ ရိုက်ပေးထားတာပါ။ မန်းတဲ့ထဲမှာ ဓာတ်ပုံထဲ့လို့ရရင် ရိုက်ပြချင်ပါတယ်။ ခုတော့ နမူနာလေးရေးပြပါမယ်။
Mr or MRS………
NacLong (10 Tab) Effervescent
Once Daily After Breakfast
( 1 Tablet Dissolve 1/2 Glass Of Water) ” Mucolytic”
(PIN LIMMEECHOCKCJAI, DR)
ဒီလိုမျိုးကို ဒီမှာလည်း မြန်မာလို ရိုက်ပြီး ပေးရင် အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။ ဘာမှ သိပ်အပန်းကြီးမှာ မဟုတ်ဖူးလို့ထင်မိပါတယ်။ အစစအရာရာ တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဒီလောက်ကတော့ ဖြစ်သင့်နေပါပြီ။ လူ့အသက်နဲ့ ဆိုင်တာ ဒီလို ပြီးပြီးရော ထားလို့ မရတော့ပါဘူး။
သမီး ရေးပေးတဲ့ idea လေး ဒေါ်ဒေါ် ဓာတ်ပုံ တင်ပေးထားတယ်။
ဒီလိုမျိုး ဟို အရင်က မြန်မာပြည် ဆေးရုံတွေမှာ compounder ဆိုတာဆေးပေးဖို့ အတွက် ခန့်ထားတာရှိပါတယ်။
အရင်ခေတ်ကတော့ ဆေးအမှုန့်တွေကို (ကလေးတွေအတွက် ဆေးဖျော်သလို) orange syrup
စတာတွေနဲ့ ရောဖျော်ပြီး ဆေးညွှန်းရေးပေးရတာပါ။
(Shake the botttle before use ကို မေ့ပြီး မလှုပ်ပဲသောက်မိလို့ ပုလင်းမှာ Shake the body after use လို့ ပြန်ရေးလိုက်ရတယ်ဆိုတာလေ)
အဲဒီ ရှိပြီးသား ကောင်းတဲ့အကျင့်လေးကို ဖျက်လိုက်ကြတာပါကွယ်။
မပဒုမ္မာရဲ့ ” လက်ရေးတို့အကြောင်းဖွေရှာကြည့်ရှူ့သတိပြုခြင်း”ကို ဆီမီနာ လုပ်တာကို
ရွှေဘုံသာလမ်းကအေးရိပ်သာက “အေး” ဆေးခန်း ဆိုပြီး နာမည်နဲ့ ရှိနေတုန်းက မေခလာတို့ဘာတို့
မပေါ်ခင်တုန်းက ကျနော်ကို ငယ်ငယ်ထဲကမွေးခဲ့တဲ့အဖွားက ဆရာဝန်ငှါးပြီး ဆေးခန်းငယ်လေးတခု
ဖွင့်ဖူးပါတယ်။ကျနော်မမွေးခင်ကတည်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းဆိုတော့ ကျနော်အရွယ်ရောက်တော့
ကျနော် ဆရာဝန်များစွာကို ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့တာမှာ သူတို့စာသင်ပေးလို့ သူတို့လက်ရေးတွေလဲ ဖတ်ဖူး
ကျနော်မှတ်မိသလောက် လက်ရေးညံ့တဲ့ဆရာဝန်တယောက် နှစ်ယောက်ကလွဲရင်အားလုံးလက်ရေးတွေ
လှတယ်ဗျ။ အပေါ်ကနှစ်ယောက်တုန်းကတော့ တကယ်ကိုဖတ်လို့မရအောင်လှိုင်းလေတွေလိုရေးတာပါ။
ဖွားဖွားကပြန်မေးပြီး ပြန်ရေးတတ်ပါတယ်။ဒီအတိုင်းမပေးလိုက်လို့ ဘာမှတော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ပြောရရင် အဲဒီဆရာဝန်တွေက လက်ရေးလှလှလေးရေးနော်လို့ပြောဘူးတာမှတ်မိနေတာကိုပါ။
မလွှဲသာလို့ သာ လက်ရေးပျက်ရတယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ်လို့ ဆိုချင်တာပါ။
ဒီမှာတော့ ကွန်ပြူတာနဲ့ ရိုက်တာရယ်၊ဆေးဆိုရင်ဓာတ်ပုံတောင်ပါလို့ မှားစရာကိုမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။
အဲဒီလို ဖြစ်သွားရင်တော့လဲ လက်ရေးသီသီ လက်ရေးညီညီ အားလုံးအိုကေသည်ပေါ့ခင်ဗျား။
ကျွန်မက ကိုသစ်စာကို apply လုပ်လိုက်တာလေ။
ကိုသစ်ရဲ့ ဖွားဖွားက ဒီအတိုင်း ထင်ရာဆေး မပေးလိုက်တဲ့ တာဝန်သိသူပါ။
ဂျပန်က ဆေးဓာတ်ပုံတောင်ပါတယ်ဆိုတော့ patient right အပြည့်ပါလားနော်။
ဟီးးးးး ချာဝန်လက်ရေးမလှလို့ ဆေးမှာဝယ်မိမှာစိုးလို့
ဆိုပီးး တူ့ မီးမကို ဆေးဆိုင်ထောင်ပေးလိုက်တာ
ဆရာဝန်တစ်ယောက်က အခမ်းအနားမှာပြောဖို့အတွက် စာကို ညထဲကရေးထားပါတယ်
ဟောပြောပွဲစတော့ သူရေးထားတဲ့စာကို သူပြန်ဖတ်လို့မရတော့ပါဘူး
ကြွရောက်လာတဲ့ ပရိတ်သတ်ထဲမှာ ဆေးဆိုင်ဝန်ထမ်းများမပါဘူးလားခင်ဗျား..တဲ့။
လူတစ်ဦး ဒါမှမဟုတ် လူနည်းစု အမှားကို ထောက်ပြရင်းရင်းနဲ့ လူတန်းစားကြီးတစ်ခုလုံးကိုပါ
ကောင်းတာကတော့ ခြေမမကောင်းခြေမ လက်မမကောင်း လက်မ အဲလိုပဲဖြစ်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်။
မှန်ပါတယ် ကိုပေါက်၊ ထောက်ခံပါတယ် ကိုပေါက်။ :D
ကျွန်တော်က အစက လက်ရေးလှတယ်ဗျ…။ အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်မှ မလှတော့တာ တစ်ချို့စာလုံးတွေဆိုမရေးတတ်တော့ဘူး လုပ်ကြပါဦး
ဆရာဝန်ကားစီးတာ ကြည်ဖြူပေးလိုက်ပါ ဆရာရယ်၊သူ့ကိုမပေးလည်း အခြားဆေးဆိုင်ကိုပေးရမယ့် ပိုက်ပိုက်ပဲဟာ။သိပ်ရိပ်ရင်တော့ သူ့ဆေးခန်းကိုပါ ဝေါင်ဝေါင်ရှေးပေါ့။
ဆရာဝန်တွေ ကာတွန်းဇာတ်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်လို့။ဆရာထက်လည်း ငြိမ်းချမ်းပါစေ၊
အခုတလောတော့ ဆရာဝန်လူတန်းစားက အပြောခံအဆိုခံဖြစ်နေပါတယ်။သနားထှာ။
အဲဒီအပေါ်လင့်တွေမှာ အထောက်အကူပြု အကြံပေးထားတာတွေရှိပါတယ်..။ တခုခုစဉ်းစားလို့ရနိုင်အောင်ပါ..။
The more you understand about your prescription, the less likely it is that you will haveamedical error. For example, your pharmacist may makeamistake reading your doctor’s handwriting. If your doctor’s writing is not clear and easily read, your prescription may take longer to fill or you may be given the wrong dose or the wrong directions.
Some doctor’s offices now use electronic prescribing. You may receiveaprinted prescription to take to the pharmacy, or your prescription may be faxed or e-mailed to the pharmacy. Ask to seeaprintout of these prescriptions before leaving your doctor’s office.
ကြည့်ရတာ.. ဆေးလက်မှတ်က.. ဆေးထုတ်နိုင်တာမို့.. ယူအက်စ်မှာတော့.. ဆေးလက်မှတ်က.. ငွေထုတ်နိုင်တဲ့ ချက်ခ်လိုပါပဲ..။
ဆရာဝန်လက်ရေးမလှတာထက် illegible ဖြစ်နေရင် ဆိုးတာပါ။
တစ်ချို့  လက်ရေးမလှပေမဲ့ ဖတ်လိုရတယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ်နော။
တီချာတွေ့ဖူးတဲ့ ဆရာဝန်မကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သိမလားပဲ။
တီချာတို့ မြို့ နယ်ပညာရေးမှူးရဲ့ သမီးပါ။ ဒေါက်တာခင်ဌေးကြည်တဲ့။
အမြဲပြုံးနေတာပဲ။လက်ရေးလည်း သိပ်လှတာပဲ။ ဟိုခေတ်တုန်းက ပုဂ္ဂလိက
ဆေးခန်းပေမဲ့ လူနာမှတ်တမ်းစာအုပ်ပေးတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲကသူ့လက်ရေးလေး
တီချာပြောသလိုပဲ လက်ရေးလှဖို့ထက် ဖတ်တဲ့သူရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတာပါ။
တစ်ချို့လက်ရေးတွေက ကလေးလက်ရေးလို တစ်လုံးကြီးတစ်လုံးသေး
ဖတ်လို့ရနေတော့ ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့၊ မိုးစက်ကတော့ ၇တန်းလောက်ကတည်းက အင်္ဂလိပ်စာကို လက်ရေးဆက်ရေးတယ် စာလုံးစောင်းစောင်းလေးတွေကိုညီအောင် တော်တော်လေ့ကျင့်ယူခဲ့ရတယ် အဲဒီလက်ရေးနဲ့ပဲ ဆယ်တန်းအောင်ခဲ့တာ၊ ဆရာမတွေကတော့ ဖတ်လို့မရဘူးလို့တစ်ခါမှမပြောဘူး
ဆရာဦးသိန်းအောင်ရဲ့ ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားလမ်းက ကလေးဆေးခန်းမှာတော့ ကောင်တာကနေ ဘောင်ချာလေးကို ပရင့်ထုတ်ပေးတယ်… ကုန်တိုက်တွေလိုဘောင်ချာစက်လေးနဲ့လေ.. အဲဒီမှာ consultant fee, medicine name တွေအားလုံးပါတော့ နောက်ဆိုဆေးကိုမှတ်ထားပြီးတိုက်ရင်တောင်ရတယ်… ဆေးခန်းတိုင်းအဲလိုလေးလုပ်နိုင်ရင် လူနာတွေလဲ အပြင်မှာဆေးသက်သက်သာသာဝယ်လို့ရနိုင်ပြီပေါ့နော်….
ဆေးတက္ကသိုလ် သင်ရိုးမှာ လက်ရေးလှဘာသာ ထည့်ပေးလိုက်ရင် ပြသနာ မရှင်းလော….။ လက်ရေးလှ ဗလာစာအုပ်များလည်း ပိုမရောင်းရလော…တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ပိုမတိုးတက်လော…ဤကား သဂျီးအလိုတည်း…။
pandonmar လည်းလှုပ်တတ်လာပြီ ။
သူ့အရပ်နဲ့သူဇာတ်ဆိုသလို သူ့ဆေးခန်းမှ ရောင်းတဲ့အရောင်းစာရေးမများသည်သာ သူ့ဆရာဝန်၏ လက်ရေးနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် နေသည်မို့ သူ့ဆေးခန်းမှာ သာဆေးဝယ်ခြင်းသည် အမှားအယွင်းနဲနိုင်သည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။
ဒါမှမဟုတ်ဆရာဝန်ဆေးစာရေးရင် ၊ ဘာဆေးလဲ တခါတည်းမေးပြီးမှတ်ထားလေ။
If you do not understand what your prescription says, do not be shy. Ask your doctor or another healthcare provider in the office for assistance.
သူကြီးညွှန်းသလို မသိရင်မေးဖို့မရှက်သင့်ပါဘူး။အားနာတယ်ဆိုတာ ဒီနေရာမှာဖယ်ထားသင့်ပါတယ်။
မေးခံရတဲ့ သူကလည်း ရှင်းပြပေးဖို့လိုပါတယ်။
အမြန်ရေးကြရတော့ m,n,r တွေ မပီတော့တာ များပါတယ်။
လူနာနဲ့ ဆရာဝန် မမျှတာတွေကြောင့်လည်းပါတာပေါ့နော်။
ဒေါက်တာခင်ဌေးကြည်တို့က ဆရာဝန့်အပြုံးဟာ ရောဂါတစ်ဝက်ပျောက်စေတယ် ဆိုတာလိုပေါ့နော်။
ပြုံးတဲ့ ဆရာဝန်ကျတော့လည်း သူ့လက်ရေးဆိုးရင်တောင် သည်းခံပြီးပြဖြစ်ကြတာပါပဲ။
ဒါကြောင့် တစ်ချို့က ဆေးခန်းမှာပဲ ၀ယ်ကြတယ်လေ။ ပေသီးခေါက်တဲ့သူတွေ ကတော့ ဈေးသက်သာတဲ့နေရာ ရှာဝယ်ချင်တာပေါ့။
တစ်ချို့အထူးကုဆေးခန်းတွေက နည်းနည်းပဲပိုယူပေမယ့် တစ်ချို့က တအားဈေးတင်တတ်တယ်။
သူ့ဆေးခန်းနဲ့သူ့အရောင်းစာရေးမလည်း တခါတရံ မလည်ဝယ်တဲ့ စာရေးမနဲ့ တိုးရင် မှားတတ်ပါသေးတယ်။
သည်းနုအေး ကို ရှင်းပြသလို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတာ စိတ်အချရဆုံးပါ။
သူကြီးစာပဲ ကိုးကားပါမယ်၊(အမေဂျီးကားက လူတွေကိုတောင် ဒီလိုစစ်ခိုင်းထားပါတယ်)
Asasmart medical consumer, it isagood idea to check your prescription and make sure that it is filled correctly at the pharmacy.
(ပဒုမ္မာ လှုပ်တာ ဆူးကြောင့်ပါ၊၂၀၁၂ မှာ ကြီးကြီးငယ်ငယ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ မလှုပ်တတ်ရင် ဂေဇက်မှာ မနေရမှာစိုးလို့ ဆူးကိုလှုပ်ပေးခိုင်းရတယ်):D
ဦးမိုက်သမီး ဆေးကျောင်းသူကြီးအတွက် ဖတ်စေချင်လို့ ရှာလိုက်ရတာ မောသွားတာပဲ။
ကွန်မန့်ကောင်းတွေ ရေးကြတဲ့ ခေတ်ကို လွမ်းမိပါတယ်။
တက်စေသတည်းလို့ လုပ်မလုပ်ဟာ တီဒုံက မိနစ်ပိုင်းစောသွားတော့
free wifi ရတုံးလေး သူကြီးပိုက်ပိုက် နှိုက်လိုက်အုံးမယ်။
၁၀ တန်းဖြေပြီး ဒက်ဒီ ဆေးခန်းကူတုန်းကတော့ သူရေးပေးတဲ့ ဆေးနာမည်တွေကို ရှာရတာ ကိုယ့်တာဝန်။
ကိုယ့် လက်ရေးက လုံးဝမလှဘူးး
ဒက်ဒီလက်ရေးက လှတဲ့ထဲပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်ရှုပ်တာပဲ။ စာလုံး အဆွဲလေးတွေ သိမှသာ ဘာရေးတယ်ဆိုတာ ဖမ်းနိုင်တာမျိုးပဲ။
ဒီမှာတော့ ဆေးခန်းမှာ ဆေးတွေ စဉ်ပြီးရင် ဆရာဝန်ကို ပြန်ပြကြတယ်။
ဟိုက အိုကေဆိုမှ လူနာကို ရှင်းပြကြတာ။ ဆေးတိုင်းမှာလည်း လူနာနံမည်၊ ဒိတ်၊ ဘာဆေး ဘယ်နှကြိမ်သောက်ဆိုတာ ကွန်ပြူတာစာစီပြီး စတစ်ကာထုတ်ထားတာ။
အဲဒါလေး စောင့်ရတာပဲ။ ဆေးထုတ်တာက မကြာဘူးး
ဆရာဝန်လက်ရေးဆိုတာ နာမည်ကြီးပေ့ါ။ :hee:
ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်မဟုတ်ပဲ လက်ရေးစုတ်ပြတ်နေတာကျတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ :e:
အဘိဓမ္မာသင်တန်းတက်လိုက်တာ လက်ရေးရ ဖတ်လို့ရတဲ့အထဲ ပြန်ပါလာတာ အမြတ်ပဲ။
အလင်းဆက်ရယ်။ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။ တကယ့်ကို ရှာရတာ မူးနောက်နေရော။ Tab ကလည်း မြန်မာစာ အမှန်မပေါ်တော့ ဖတ်မရ။ အဲဒီ ရှာဖွေရေး ဘောက်စ် ဆိုတာကို သုံးရကောင်းမှန်းကို မသိခဲ့တာ။ “အ” ချက် ကတော့။